Oromiyaa keessa deemtee ajjeestee qabuun rakkoo hin qabu. Tigiraayi keessa deemtee ajjeestee qabuun garuu rakkoo qaba. OPDO'n akkasi yaaddi!! Kichuu
HomeAmharicOromiyaa keessa deemtee ajjeestee qabuun rakkoo hin qabu. Tigiraayi keessa deemtee ajjeestee qabuun garuu rakkoo qaba. OPDO’n akkasi yaaddi!!
Daangaa Tigraay fi Eertiraa gidduutti waa bokokee jira. TPLF fi mootummaan Eertiraa akka hamaatti wal gaarreffachaa jirani. Waraanni achi irraa kaafamuun TPLFitti sodaa guddaa gadhiiseera. Kanaafuu ummata gowwoomsanii akka waan ummanni didetti waraanni achirraa bahuu mormaa jiru. TPLF ummata Tigraay gabrummaa hamaa jalatti galfatee bitaa jira. Waan ofii godhuu barbaadu kamuu maqaa ummataatiin godhaa jira. Mootummaan Eertiraa gama isaatiin waan TPLF ummata Eertiraa isaayyaas irratti kakaasuuf carraaqaa jirtu argaa jira. Yoo obsa fixate as cehee bineensota TPLF kabaluun waan hin oolle fakkaata. TPLF akka kaleessa Baadimmee jettee boochee ummata Itoophiya fayyaaleyyii dirmachiifattetti har’a waa of duuba hin qabdu.
ODP (OPDO) Ayyaana waggaa haaraa har’aa Finfinneetti qophaa’ee ture akka hin kabajamne dhorkanii jiru.Nama lama Lammii Beenyaa fi Daawwit Abdataa fuudhanii deemanii jiru. Yaada mo’ataa fi diimokiraasiin keessan eessa seene laata?
Fooliin abbaa irrummaa deebi’ee dagaagaa jira; Oromoon waa halleef of qopheessuu qaba.
“Guyyaa hara ayyanaa WBO kabaajuf garaa kolfee qaraaniyoo imaale turre. sirni ayyanas haala ho’af midhaagadhaan egaaluf keessumootnif Artistoonni beebekamoo kannen akka A Inlfineesh Qannoo, A Hirphaa Ganfureef kkf akkasumas Geggessitootni ABO heddun irratti bakka argaamanitti shira motumman biyyaa bulchina jedhu kun xaxeen bulchinsi kolfee qaraaniyoo akka hin kabaajne dhorkuun keessumoota ulfinaan dhufaan Gaddaan guutuun geggeesserra.
Wanti na ajaa’ibe garuu yommuummaa Oromoon biyyaasaarratti mirgaa guutuu argataa lata? Taateen har’a ittuu nama jabeessa malee kan nama laaffisu miti.
Qabsoon har’as borus hanga bilisummaatti itti fufa.”
Dr.Abiyi fi Lammaa Magaarsaa shira mallasi Zenawi jalatti barraatan kun ilmaan Oromoo irraatti raawwaachu eegalan.
Yeroo amma kan OPDO waliin tahe kan shira ilmaan Oromoo irraat xaxxa jiru ODF dha.
Free for Lammi Benya.
</ifram e>﻿Duruu geesse Amaan Nyafaroo
Mee walaloo isaa tana gurraaf qalbii kennaafi yaa warra ummatan ummata gubbaa jirtanihoo!
“Ummata keenya irraa dhalannee,ummatin keenya nu barsiisee,deebiinee ummata keenya nyaachuu hin qabnu.”
PMNO Duraani Alamaayyoo
Lammi Oromia Ali